Kun qoys oo maanta raashin ay ku deeqday dawladda Kuwait loogu qaybiyey Garoowe. – Radio Daljir
Kun qoys oo maanta raashin ay ku deeqday dawladda Kuwait loogu qaybiyey Garoowe.
Garowe, 01, Nov ? Dawladda Kuwait ayaa Puntland waxay ku deeqday gar-gaar raashin ah, kaasoo hay?adda daryeelka bulshada Puntland garoonka kubbada cagta ee Mira Awaare maantay ugu qaybisay ku dhawaad 1000 oo qoys, kuwaasoo isugu jira qaybaha bulshada ee ku dhaqan magaalada Garowe.
Madaxa hay?dda daryeelka bulshada Puntland mudane C/shakuur Maxamuud Guray oo ka hadlay munaasabadii qaybta raashinka oo ay goob-joog maantay ka ahaayeen madax ka tirsan dawladda Puntland, xubno ka socday baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in deeqdaan ay dawladda Kuwait ugu talagashay guud ahaanba gobollada Puntland, isla markaana ay dhaqso gobollada kale u gaarsiin doonaan.
Xildhibaan Maxamed Xuseen Nuur ?Xagaafaa? oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in ujoodkiisu uu ahaa inuu isku miisaamo hab-qaybinta dawladda Puntland ee deeqaha dalka dibbadaasa uga yimaada Puntland iyo TFG-ga, waxaana uu hadalkiisa raaciyay inuu aad ula dhacay hab-maamulka caddaaladdu ku dheehan-tahay ee Puntland ay shacabkeeda wax ugu qaybinaysay. Xildhibaanku waxaa uu walaac xooggan ka muujiyay deeqaha ka yimaada beesha caalamka ee Moqdisho lagu qaybiyo.
Xildhibaan Xagaafaa waxaana uu tilmaamay in dhibaatooyin badan ay arrintaasi dawladdu dhexe marar badan kala kulanto, dhanka nabad-galyada, iyo qaybinta caddaaladda intaba.
Ugu dambayntii waxaa deeq-daasi maantay gacantiisa ku qaybiyay duqa degmada Garowe mudane C/casiis Nuur Cilmi ?Koor? waxaa uu tilmaamay in ku dhawaad kun qoys ay u qaybiyeen deeq-daan, waxaana duqu uu hadalkiisa raaciyay qoysaska deeqdaan la gaarsiinayay in loo qiimaynayay hab-nololeedkooda iyo awoodooda dhaqaale.
Radio Daljir – Garowe